Tirada dadka Al-Shabaab ay ku dileen wadanka Mozambique oo sii kordheysa – XOGMAAL.COM
Bernadino Rafael Taliyaha booliska dalka Mozambique yaa sheegay in 90 qof la dilay ku dhawaad 70 kalana ay dhaawacyo soo gaareen tan iyo markii urur Islaami ah uu sanadkii la soo dhaafay dalkaasi ka bilaabay inuu weerraro ka fuliyo .
Dhinaca kale wararka qaar ayaa sheegaya in tirada dadka ay dileen kooxdaasi ay si weyn uga badan tahay tirada la sheegay.
Kooxdan ka dilaacday Mozambique ayaa argagax ku abuurtay waqooyiga dalkaasi, waxa ay galeen tuulooyinka iyagoo sita mindiyo kuwaasi oo ay u adeegsanayeen qoor goynta dadka tuulooyinka ku dhaqan.
Kooxdan waxay dab qabadsiiyeen in kabadn kun guri sidoo kalana waxa ay weerareen xarumo boolis, Waxaa loo yaqaanaa Al Shabaab, balse ma cadda in ay xiriir la leeyihiin kooxda ka dagaalanta bariga Afrika oo ay isku magaca yihiin.
Sidoo kale waxaa la rmeysan yahay in ay malaayiin doolar ay ka heelan iibinta alwaaxa iyo macadanta, Sanaddadii dambe ururo Islaamiyiin ah oo Al Qaeda xiriir la leh ayaa ka biloowmay dalka Soomaaliya kuwaas oo markii dambe ku faafaay Kenya ilaa Tanzaaniya, waxaana macquul ah in ay soo gaareen daka Mozambique.